The Sorcerer and the White Snake (2011) | MM Movie Store
နာမညျကွီးမငျးသားဂကျြလီနဲ့ကားဆိုတာနဲ့တငျပွောစရာကိုမလိုတော့ပါဘူး..ဒီကားကတော့ ကွညျ့ဖူးသမြှဂကျြလီရဲ့ကားတှထေဲမှာ အကောငျးဆုံးနဲ့အမိုကျဆုံးကားတဈကားဆိုရငျလညျးမမှားပါဘူး…၂၀၁၁ ကရိုကျခဲ့တဲ့ကားပမေယျ့ CGI Effect တှကေတော့ဒီနအေ့ထိကောငျးမှနျဆဲလို့ပွောရမှာပါပဲ…
သူအဲလိုလိုကျလံဖမျးဆီးနတေဲ့အခြိနျ တခွားအရပျမှာတော့ မိစ်ဆာမွှမေလေး ၂ ယောကျထဲက အမဖွဈသူ စုစုဟာလူသားယောကြာင်္းလေးတဈယောကျကို ရုတျတရကျမွငျမိရာကနခေဈြကွိုကျမိသှားပါတယျ…အဲဒီအခြိနျမှာဇာတျလမျးကစတော့တာပါပဲ…
အခဈြမှာ မကျြစိမရှိဘူးဆိုပမေယျ့ လူသားတဈယောကျနဲ့မိစ်ဆာတဈကောငျဟာအတူတူပေါငျးစညျးဖို့ဆိုတာ ဖွဈနိုငျပါ့မလား…ပေါငျးစညျးလို့ရခဲ့ရငျတောငျမှ အခကျခဲတှအေမြားကွီးရှိမှာပါ..ဒါပမေယျ့ ဒီကားလေးမှာကတော့ အခဈြကွီးတဲ့ မိစ်ဆာမွှဖွေူမလေးတဈယောကျရဲ့နှလုံးသားဖွူဖွူလေးကို အသခြောမွငျတှရေ့မှာပါ..
တဈကားလုံးနီးပါး စိတျဝငျတစားကွညျ့ရမှာဖွဈပွီးတော့ လူသားကောငျလေးတဈယောကျနဲ့ မိစ်ဆာမွှမေလေးတဈယောကျရဲ့အခဈြဇာတျလမျးဟာ အားလုံးရဲ့စိတျကိုအဆုံးထိဆှဲဆောငျသှားမှာကလညျးဒီဇာတျကားရဲ့ထူးခွားခကျြတဈခုလိုပါပဲ…
ဖိုကျတငျမငျးသားကွီးဂကျြလီဇာတျကားတိုငျးမှာ ဖိုကျတငျအလနျးတှနေဲ့ကွညျ့ရမှာဆိုပမေယျ့လညျး ဒီဇာတျကားကတော့ သနားစရာအခဈြဇာတျလမျးလေးတဈခုကို ဇာတျအိမျတညျပွီးတော့ ရေးသားထားတာကွောငျ့ဖိုကျတငျကားကွိုကျသူမြားတောငျ ဝမျးနညျးသှားစရေမယျ့ရသကိုအပွညျ့ဝခံစားရမှာပဲဖွဈပါတယျ….
ဒါကွောငျ့ ကိုရီးယားအခဈြဇာတျကားတှကေိုကွညျ့ပွီး ခံစားခငျြတဲ့လူတှအေတှကျဒီ တရုတျကားလေးကိုကွညျ့ကွညျ့ပါ…အိမျမှာနပွေီးတော့ ဖီးလျးအပွညျ့ဝယူခငျြသူမြားအတှကျဒီကားလေးကွညျ့ပွီး ဘဝအမောမြားပွနေိုငျမှာပါ….ဒီကားလေးကွညျ့ပွီး အခဈြကွီးသူမြားဖွဈကွပါစလေို့ဆုတောငျးပေးပါတယျ….
နာမည်ကြီးမင်းသားဂျက်လီနဲ့ကားဆိုတာနဲ့တင်ပြောစရာကိုမလိုတော့ပါဘူး..ဒီကားကတော့ ကြည့်ဖူးသမျှဂျက်လီရဲ့ကားတွေထဲမှာ အကောင်းဆုံးနဲ့အမိုက်ဆုံးကားတစ်ကားဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး…၂၀၁၁ ကရိုက်ခဲ့တဲ့ကားပေမယ့် CGI Effect တွေကတော့ဒီနေ့အထိကောင်းမွန်ဆဲလို့ပြောရမှာပါပဲ…
သူအဲလိုလိုက်လံဖမ်းဆီးနေတဲ့အချိန် တခြားအရပ်မှာတော့ မိစ္ဆာမြွေမလေး ၂ ယောက်ထဲက အမဖြစ်သူ စုစုဟာလူသားယောကျာင်္းလေးတစ်ယောက်ကို ရုတ်တရက်မြင်မိရာကနေချစ်ကြိုက်မိသွားပါတယ်…အဲဒီအချိန်မှာဇာတ်လမ်းကစတော့တာပါပဲ…
အချစ်မှာ မျက်စိမရှိဘူးဆိုပေမယ့် လူသားတစ်ယောက်နဲ့မိစ္ဆာတစ်ကောင်ဟာအတူတူပေါင်းစည်းဖို့ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား…ပေါင်းစည်းလို့ရခဲ့ရင်တောင်မှ အခက်ခဲတွေအများကြီးရှိမှာပါ..ဒါပေမယ့် ဒီကားလေးမှာကတော့ အချစ်ကြီးတဲ့ မိစ္ဆာမြွေဖြူမလေးတစ်ယောက်ရဲ့နှလုံးသားဖြူဖြူလေးကို အသေချာမြင်တွေ့ရမှာပါ..
တစ်ကားလုံးနီးပါး စိတ်ဝင်တစားကြည့်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ လူသားကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ မိစ္ဆာမြွေမလေးတစ်ယောက်ရဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းဟာ အားလုံးရဲ့စိတ်ကိုအဆုံးထိဆွဲဆောင်သွားမှာကလည်းဒီဇာတ်ကားရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုလိုပါပဲ…
ဖိုက်တင်မင်းသားကြီးဂျက်လီဇာတ်ကားတိုင်းမှာ ဖိုက်တင်အလန်းတွေနဲ့ကြည့်ရမှာဆိုပေမယ့်လည်း ဒီဇာတ်ကားကတော့ သနားစရာအချစ်ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခုကို ဇာတ်အိမ်တည်ပြီးတော့ ရေးသားထားတာကြောင့်ဖိုက်တင်ကားကြိုက်သူများတောင် ဝမ်းနည်းသွားစေရမယ့်ရသကိုအပြည့်ဝခံစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်….
ဒါကြောင့် ကိုရီးယားအချစ်ဇာတ်ကားတွေကိုကြည့်ပြီး ခံစားချင်တဲ့လူတွေအတွက်ဒီ တရုတ်ကားလေးကိုကြည့်ကြည့်ပါ…အိမ်မှာနေပြီးတော့ ဖီးလ်းအပြည့်ဝယူချင်သူများအတွက်ဒီကားလေးကြည့်ပြီး ဘဝအမောများပြေနိုင်မှာပါ….ဒီကားလေးကြည့်ပြီး အချစ်ကြီးသူများဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်….